के धर्म बचाउने ठेक्का स्त्रीको मात्र हो ? - Jhilko
के धर्म बचाउने ठेक्का स्त्रीको मात्र हो ?
चाहे रतिक्रियामा लीन हुँदा होस् वा कुनै आनन्दायी कल्पनामा डुब्दा होस्, स्त्रीहरुको आँखा बन्द हुने गर्छ । कुनै कुरामा आँखा बन्द गरेर लीन हुनु स्त्रीको चरित्र नै हो । जब कि पुरुषहरुको चरित्र त्योभन्दा भिन्न हुने गर्छ ।
स्वभावैले पुरुषहरु जिज्ञासु हुन्छन् । जिज्ञासाले नै पुरुषलाई सम्भवतः पहिलो पटक पाङ्ग्रा (व्हील) बनाउन उत्प्रेरित गर्‍यो । पुरुषले नै रोबर्ट पनि बनायो । पुरुषले नै ईश्वरको कल्पना गर्‍यो, धर्म बनायो, नीतिनियम बनायो । सत्ता चलायो । अनेकौं कथाकुथुङ्ग्री र साहित्यको सिर्जना गर्‍यो ।
जब युग मातृसतात्मक थियो, तब कुरा अलग थियो । विस्तारै पुरुषले महिलाको सत्ता हरण गरे । त्यसपछि महिलालाई पुरुषले दासी बनायो । मनुस्मृति लेख्यो । रामायण लेख्यो । र, भनियो ‘ढोल गवाँर शूद्र पशु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी’ अर्थात् ढोल, गँवार, शूद्र, पशु र नारीलाई जति सताए पनि हुन्छ ।
यसरी स्पष्ट रुपमा पुरुषले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न लेखिदिए पनि त्यसलाई शिरोधार्य गर्नुमा पुरुष कम, महिला नै बढी दोषी देखिन्छन् ।
संसारका जुनसुकै धर्म स्त्रीमाथि अन्याय गर्न पछि परेका छैनन् । धेरै समय बितेको छैन, पश्चिमा मुलुकमा अलिकति टाठी–बाठी स्त्रीलाई बोक्सी (विचेस) भएको आरोपमा जिउँदै जलाइन्थ्यो । चीनमा पनि स्त्रीलाई घरको अन्य सम्पत्तिसरह ठानिन्थ्यो । पतिलाई आफ्नी पत्नी जलाउन पाउने पूरापुरी अधिकार थियो । अरबको हालत अझै उस्तै छ । भारतीय उपमहाद्वीपमा भने स्त्रीलाई पढ्न–लेख्न नदिने, सानै उमेरमा बुढो मान्छेसँग बिहे गराइदिने र बुढोसँगै सती पठाउने गरिन्थ्यो । तापनि स्त्रीको धैर्यता र समर्पण हेरौं न, हरेक अन्याय र अत्याचार चुपचाप सहिरहेका छन् । अझै कति सहने हुन्, समयको गर्भमै छ ।
बंगलादेशी नास्तिक लेखिका तसलिमा नसरिनले किताबै लेखेकी छन्, ‘आईमाइको जात हुँदैन’ । सन्सारभरि नै महिलाको वास्तवमै जात हुँदैन । पहिचान हुँदैन । कुनै स्त्रीले कुनै पुरुषसँग विवाह गर्नेवित्तिक्कै उसले आफू जन्मेको घर, ठाउँ र पहिचान चटक्कै छोडेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उसको पुरुषसँग जोडिएर नयाँ पहिचान बन्छ । जस्तै, श्रीमति पोख्रेल, श्रीमति थापा, श्रीमति विश्वकर्मा, श्रीमति परियार आदि इत्यादि ।
हिन्दु धर्मले चतुर्वर्ण व्यवस्था गरेको छ । यो ‘वान वे’ जात–व्यवस्था प्रणाली हो । यसमा कसैको पनि कथित तरिकाले जात गिर्ने व्यवस्था त गरेको हुन्छ, तर उक्लिने कुनै उपाय नै राखिदिएको छैन । जात व्यवस्थाबाट महिला–पुरुष सबै पीडित छन्, तर लाग्दछ आफूले पनि अर्कालाई हियाएर गिराउन पाउने भएपछि सबै खुशी नै छन् । आफ्नो खास जात ठूलो, अर्को खास जात सानो भन्ने भावनालाई नै ब्राह्मणवाद (बाहुनवाद) भनिन्छ । यो होइन कि बाहुनवाद बाहुन जातमा मात्रै हुन्छन्, यो सबै जात र लिङ्गमा उत्तिकै हुन्छ ।
स्त्रीहरु एकातिर जातको चक्करमा पीडित छन् भने धर्मको नाममा प्रताडित छन् । सारा धर्मग्रन्थ, पण्डित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पास्टर र मुनीहरु स्त्रीलाई शोषण गर्ने ध्याउन्नमै हुन्छन् । तापनि आँखा चिम्लिने स्वाभाविक गुणका कारण महिलाहरु खुशी–खुशी धर्मको धन्धामारुमल्लिरहनु विडम्बना हो ।
कहिलेकाहीँ उपवास बस्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रै हो । यसले शरीरका भित्री अङ्गलाई केही आराम दिन्छ र शरीर पुनः तरोताजा राख्दछ । तर, यही उपवासलाई धर्मसँग जोडेर अनिवार्य गरियो भने यो पीडादायी पनि बन्न सक्छ ।
घर–घरको कुरा हो । हिन्दु नारीहरु प्रत्येक सप्ताह ब्रतको नाममा भोकभोकै बसेका हुन्छन् । यसले उनीहरुको शरीर सुकाएर दुर्बल र रोगी बनाउने कामबाहेक अरु केही गर्दैन ।
सोमबारे ब्रत, सन्तोषी माताको ब्रत, भाकलको ब्रत–पुजापाठ आदि महिलाले जानाजान गर्ने बेवकुफी नै हो । विज्ञानको कसीमा घोटेर हेरौं, तर्कसंगत कुरा गरौं । के गाईले टाट्नोमा हालिदिएको घाँस नखाँदैमा साँढेको आयु बढ्छ ? उत्तर सहज छ– बढ्दैन ।
ब्रत–पुजापाठका कारण घरमा सधैं तनाव
काठमाडौंकी एक धार्मिक महिला हरेक हप्ता कयौं पटक ब्रत बसेकी हुन्छिन् । ब्रत बस्नुको उनको उद्देश्य बडो असल छ । उनी घरपरिवारमा खुशी चाहन्छिन् । लोग्नेको उत्तरोत्तर प्रगति र दीर्घायु होस् भन्ने चाहन्छिन् । त्यसैले उनी हरेक हप्ता सोमबारे ब्रत लिन्छिन् । तर उनको ब्रतका कारण घरमा सधैं समस्या मात्र खडा भएको कुरा कसैले विचार नै गरेका छैनन् । अझ खास समस्या त तब खडा हुन्छ, जब उनन्ले सन्तोषी माताको निर्जला उपवास लिन्छिन् । उनले उपवास राखेको दिन स्वाभाविक हो, त्यस दिन घरमा खाना पाक्दैन । स्कुल जाने उनका छोरा–छोरी, जागिरमा जाने श्रीमान सबै त्यस दिन भोकै रहन बाध्य हुन्छन् । भोको मान्छेको दिमागमा खानाभन्दा अर्थोक के आउँछ र ? त्यसैले उनीहरु दिनभरि कचरपचर खाएर बस्छन् ।
त्यसमाथि उपवासी श्रीमतिले अनेक नियम लगाएकी छन् । अमिलो त छुँदै नछुनू भन्ने । कचरपचर खाँदै घरका कसै न कसैले कुनै न कुनै तरिकाले अमिलो खाएकै हुन्छन् । तर जसै घरका कसैले अमिलो खाइदिन्छन्, उसै उता उनको ब्रतको फल प्राप्त हुन अड्चन पैदा हुन्छ । यसरी उनले लिने गरेको सन्तोषी माताको ब्रतबाट कुनै लाभ प्राप्त हुनु त कता हो कता उल्टै घरमा तनाव, अतिरिक्त खर्च र उनको र परिवारको स्वास्थ्यमा हानि मात्र हुने गर्छ ।
महिनावारीको नाममा छुत
महिनावारी हुनु महिलाहरुको नियमित प्रक्रिया हो । यस्तो बेला महिलाहरुको शरीरबाट धेरै रगत बग्ने हुनाले कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । सुरुमा महिनावारी भएको बखत केही गर्न नहुने, भान्सामा पस्न नहुने नियम रजस्वला भएकी महिलालाई केही आराम दिने नियतले राखिएको हुनुपर्छ । तर जब यसलाई धर्मसँग जोडेर छुतछात व्यवस्थामा परिणत गराइयो, तब महिलाका लागि वास्तविक पीडाजनक अवस्था भयो ।
पश्चिम नेपालमा महिनावारी भएकी स्त्रीलाई घरबाट टाढै गोठ वा एउटा सानो असुविधाजनक कोठामा राखिन्छ, जसलाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ । छाउपडीको अवस्थामा घाम नदेखिने अस्वस्थकर अँध्यारो कोठामा रहनु परेका कारण कयौं स्त्री झन् रोगको शिकार भएका छन् । तर कतिपय पढेलेखेका पुरुषले समेत छाउपडी प्रथालाई सुदूरपश्चिमका सौन्दर्य र पहिचान भनेको देखिन्छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के हो भने त्यसलाई स्त्रीहरुकै समर्थन प्राप्त छ ।
भनिन्छ– कहिले सासुको पालो, कहिले बुहारीको पालो ! हेरक बुहारी एक दिन सासु बन्छिन् । तर तिनै बुहारी जब सासु बन्छिन्, तब हिजो धर्म र संस्कृतिको नाममा आफूले पाएको सास्ती, ताडना सबै भुल्छिन् र फेरि त्यस्तै किसिमको ताडना र बुहार्तन खप्न आफ्ना बुहारीलाई बाध्य पार्छिन् । यो नेपाली समाजको कुरुप दृष्य हो । एकाईसौं शताब्दीमा आइपुग्दा अब हरेक महिलाले आँखा खोल्नुपर्छ । पुरुषले पनि धार्मिक जडताबाट उठेर समानता, भाइचारा र न्यायको पक्षमा खडा हुनु आजको आवश्यकता हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
मेरो देशको रङ्ग
शान्ति–सुरक्षा, पृथकतावाद, सुन तस्करी र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालय सफल:...
तलिबानका संस्थापक र अमेरिकी विशेष दूतबीच भेटवार्ता
अमेरिकाका विशेष दूत जलमे खालिजादले तलिबानका संस्थापक मूल्ला अब्दुल घानी बरादरसँग...
राहुल हुन कि मोदी, सरकार बनाउन आउते जरूरी
भारतको १७ औं लोकसभा निर्वाचन शुरू हुन गइरहेका बेला आगामी निर्वाचनमा कसैको स्पस्ट...
हिन्द–प्रशान्तमा नेपाललाई डुबाउने खेल
डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकी सिनेटले ‘एसियालाई आश्वस्त पार्ने सम्बन्धी ऐन’ नै पारित गरेको...